Nandefa sidina vaovao avy any Roma mankany Larnaca i Sipra Airways
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nandefa sidina vaovao avy any Roma mankany Larnaca i Sipra Airways
Desambra 17, 2019
Sipra Airways dia manambara ny fanombohana ny làlana vaovao avy any Roma, Italia mankany Larnaca, Sipra manomboka amin'ny fahavaratra 2020, miaraka amin'ny sidina roa isan-kerinandro izay ho lasa ampahan'ny tambajotra nambaran'ny mpitatitra avy any Sipra.
Ny sidina dia hiasa manomboka amin'ny 13 Jona, isaky ny Alarobia sy Sabotsy.
Roma no seranam-piaramanidina Italiana faharoa hiasan'ny Siprosy Airways, taorian'ny nanambaran'ny orinasa ny fanampiana an'i Verona ho an'ny tambajotram-pivelarany izay nivelatra tamin'ny Novambra lasa teo.
Natalia Popova, talen'ny varotra ao amin'ny Cyprus Airways, dia nilaza hoe: "Matoky izahay fa ny fampidirana an'i Roma amin'ny tamba-jotra dia ho safidy malaza eo amin'ireo mpandeha mankany Sipra ary hitondra ny anjara birikin'ny fitomboan'ny mpizahatany avy any Italia mankany amin'ny toerana tiantsika io."
Charlie Airlines Ltd, orinasa iray voasoratra anarana any Sipra, dia nahazo ny tolo-tanana tamin'ny volana jolay 2016 ho an'ny zony hampiasa ny marika Sipra Airways mandritra ny folo taona. Ny sidina voalohan'ny orinasa dia tamin'ny Jona 2017.
Ny Sipra Airways dia miasa amin'ny sidina mankany Eropa sy Moyen Orient. Ny sidina Sipra Airways rehetra dia ampiasain'ny fiaramanidina Airbus A319 miaraka amina seza 144 amin'ny kilasy toekarena.
Tamin'ny volana jolay 2018 dia nandalo tamim-pahombiazana ny Audit Operational Security Audit (IOSA) an'ny International Air Transport Association (IATA), iray amin'ireo fenitra ambony indrindra manerantany amin'ny fiarovana ny zotram-piaramanidina.
Tamin'ny Oktobra 2018, tonga mpikambana ao amin'ny International Air Transport Association (IATA) i Sipra Airways. Ny tanjon'ny orinasa maharitra dia ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampitomboana ny fizahan-tany any Sipra, ary ny fanoloran-tena hanitatra ny faravodilanitra ho an'ireo mpandeha eo an-toerana.
Centara dia manova ny tampon'ny Resort Maldives Resort ho loharanom-pahefana maharitra masoandro
Korontana any Paris: rotaka, fiara may ary baomba mandatsa-dranomaso